Filimada maafiyada ugu fiican: maxay yihiin? UPDATED 2018 | I sii wakhti firaaqo
Gabriela moran | | cine, Shineemada Waxqabadka, Shineemo noocyada, General
ka Filimmada Mafia ayaa kiciyay xiise aad u sarreeya dhagaystayaasha caalamiga ah. Goobihii waxaan ka helaynaa iskudhafyo soo jiidasho leh oo ay ka buuxaan fadeexad iyo ficil. Iyadoo taas leh tixraac ayaa loo soo qaatay arrimo ay ka mid yihiin ka ganacsiga badeecadaha, isku dhacyada u dhexeeya dhinacyo kala duwan iyo hal -abuur aad u weyn si loo fuliyo qorshayaasha ka baxsan sharciga la dejiyay. Mowduucyo waaweyn oo lagu qarxiyo shaashadda weyn! Taasi waa sababta maqaalkan oo dhan aan ugu soo bandhigno xulashadeena filimada maafiyada ugu fiican abid.
Shirqoolyadu ma matalaan sheeko sheeko: waxay ka tarjumayaan xaqiiqda qallafsan ee ka dhex jirta ururada dhexdooda maafiyada iyo agagaarkooda. Si kastaba ha noqotee, sheekooyinku waxay naga buuxiyaan adrenaline iyo khiyaanooyin iyada oo loo marayo jilayaal aan caadi ahayn oo jecel raaxada, awoodda iyo damaca. Akhri si aad wax uga ogaato sheekooyinka ugu muhimsan ee nooca filimka soo saaray!
Tahriibintu waa dembi: badeecadaha sharci -darrada ahi way kala duwan yihiin waqtiyada iyo dhulalka. Tubaakada, khamriga iyo dawooyinka dardaaranka ayaa lagu daray liiska badeecada la ciqaabay muddooyin kala duwan. Waxaa jira ururo u heellan ka ganacsiga xitaa dadka!
Sababo la xiriira kakanaanta hawlgallada, dambiilayaashu waxay abaabulaan kooxo dhexdooda ah oo lagu maamulo tilmaamo aan la ruxi karin. Taasi waa sababta maafiyada halyeeyada loo sameeyay waqti ka dib. Tusaale ahaan waxaan ka heli Mafiyada Talyaaniga, Ruushka iyo Jabaanka oo ka mid ah kuwa la aqoonsan yahay. Dhinaca kale, ka Qaaradda Ameerika waxay kaloo leedahay shabakado ballaaran dembiyada abaabulan, kuwaas oo dhiirrigeliyay filimo badan oo maafiya ah.
Ka mid ah cinwaannada soo saaray dhagaystayaasha ugu badan tiyaatarada filimada, waxaan ka helnaa kuwa soo socda:
1 Godfather (Qaybta I, II, III)
4 Dhex galay
5 Lama -taabtaanka ah ee Eliot Ness
6 Burcad American
7 Filimo Mafia kale oo lagu taliyay
Godfather (Qaybta I, II, III)
Waa filim shaneemo oo leh laba taxane. Waa la -qabsiga sheekada Mario Puzo waxaana agaasime ka ahaa Francis Ford Coppola oo caan ah. Filimkii ugu horreeyay ee saddex -geesoodka wuxuu ku guuleystay Oscar filimka ugu fiican sannadka. Waxaa la sii daayay 1972 waxaana jilay Marlon Brando, Al Paccino, Robert Duvall, Richard Castellano iyo Diane Keaton.
"Aabbaha" wuxuu ka warramayaa sheekada qabiilka Corleone: oo ka kooban qoys Talyaani-Mareykan ah oo ka mid ah shanta qoys ee ugu muhiimsan Cosa Nostra ee New York. Qoyskan waxaa madax u ah Don Vito Corleone, oo xiriir la leh arrimaha maafiyada.
Taariikhda dib -u -tiriyey dib -u -eegistii qaybaha labaad iyo saddexaad ee la sii daayay 1974 iyo 1990 siday u kala horreeyaan. Qoysku wuxuu leeyahay 3 wiil iyo haweeney. Qaarkood waxaa muhiim u ah inay sii wadaan ganacsiga qoyska, si kastaba ha ahaatee kuwa kale ma daneeyaan. Caadiyan waxaan aragnaa Don Vito oo la shaqeynaya qoyska si uu u ilaaliyo boqortooyadiisa.
Dhammaan saddexda filim waxaan ka helnaa xulafo iyo isku dhacyada u dhexeeya shanta qoys ee ugu waaweyn oo qayb ka ah maafiyada Talyaani-Ameerika oo gobolka maamula. Marka lagu daro Corleones, waxaan helnaa qoyska Tattaglia, Barzini, Cuneo iyo Stracci.
Shaki la'aan, waa saddex -geesood oo aanad seegi karin! Saddexdiisa filim ayaa ka mid ah soo -saarayaasha sida weyn loogu amaanay uguna qaddariyay caalamka. Sannadkii 2008, waxay gashay kaalinta koowaad qiimeynta 500 -ka Filim ee ugu Wanaagsan., oo ay samaysay majaladda Empire.
Waa mid ka mid ah soosaarayaashii ugu badnaa ee Quentin Tarantino, waxaa la sii daayay 1994 waxaana loo arkaa mid ka mid ah aflaamtii ugu wanaagsanaa tobanka sano. Filimku wuxuu u qaybsan yahay dhowr cutub oo isku xiran. Waxaa jilaya jilayaal caan ah sida: Uma Thurman, John Travolta, Samuel L. Jackson iyo Bruce Willis.
Dhagarta wuxuu sheegayaa sheekada Vincent iyo Jules: laba nin oo wax ku dhuftay. Waxay u shaqeeyaan burcad khatar ah oo lagu magacaabo Marsellus Wallace, oo leh xaas cajiib ah oo la yiraahdo Mia. Marsellus wuxuu u xilsaaraa shaqaalihiisii ​​hawl -qabadka hawsha soo -kabashada boorso qarsoodi ah oo laga xaday, iyo sidoo kale inuu daryeelo xaaskiisa marka uu magaalada ka maqan yahay.
Mia waa gabadh aad u qurux badan oo caajis ku ah nolol maalmeedkeeda, sidaa darteed wuxuu ku lug yeeshaa jacayl Vincent: Mid ka mid ah shaqaalaha ninkeeda! Xiriirka ka dhexeeya labadani wuxuu u taagan yahay khatar weyn haddii ninku ogaado xaaladda. In kasta oo digniinta Jules ay tahay, haddana Vincent wuxuu u oggolaanayaa dareenkiisa Mia inuu koro oo uu ka dhaadhiciyo damaceeda oo dhan, oo midkood naftiisa halis gelinayo!
Mid ka mid ah socodkooda magaalada, waxay ka qeybgalaan naadi halkaas oo mid ka mid ah muuqaalada ugu summadaha badan ee filimka ay ka dhacdo qoob -ka -ciyaarka dabaqa ah.
Iyada oo leh qaabkii xiisaha badnaa ee Tarantino, sheekadu way soo baxaysaa oo ay ka buuxaan rabshado, dil, daroogo iyo kaftan madow. Haddii aadan arag, ma seegi kartid!
Magacani wuxuu u dhigmaa dib u habeyn filim la sii daayay 1932. Nooca cusub waxaa la sii daayay 1983 waxaana jilay Al Paccino. "Wajiga" cama u dhiganta mid ka mid ah aflaamtii maafiyada ee dhaliyey murankii ugu badnaa: Waxaa lagu qiimeeyay "X" gudaha Mareykanka iyada oo ay ku badan tahay rabshadaha!
Tony Montana, oo ah halyeyga, waa muhaajir Cuba u dhashay oo leh taariikh murugo leh oo degta Mareykanka. Tony wuxuu ka daalay nolol ay ka buuxaan saboolnimo iyo xaddidaadyo, Tony wuxuu go'aansaday inuu hagaajiyo tayadiisa nololeed kharash kasta. Taasi waa sababta isaga iyo saaxiibkiis Manny ay u bilaabaan inay shaqooyin sharci -darro ah u qabtaan madaxda mooryaanta deegaanka. Dhowaan hankiisu wuu koraa oo wuxuu bilaabaa meherad u gaar ah oo ka ganacsata daroogada wuxuuna dhisaa shabakad qaybin iyo musuqmaasuq oo adag. Wuxuu ka mid noqday kuwa ugu muhiimsan ee ka ganacsada daroogada gobolka!
Markuu ku guuleysto, wuxuu go'aansadaa inuu ka guuleysto saaxiibtiis mid ka mid ah cadowgiisa. Gina, oo ay ciyaareyso Michelle Pfeiffer, waa haweeney halyeey ah oo guursata Tony waxyar kadib.
Tony wuxuu qabatimay maandooriyaha kookaynka waxaana ku sii adkaaneysa inuu xakameeyo xanaaqiisa. Wuxuu bilaabaa inuu kordhiyo liiska cadowgiisa iyo inuu yeesho dhibaatooyin guur. Intii sheekadu socotay, muuqaallo badan oo iskahorimaad ah oo lala galay cadowga ururka ayaa furmaya.
Ma seegi kartid filimkan, wuxuu ku dhex jiraa 10 -ka sare ee xulashada Machadka Filimka Mareykanka!
Kuwa caanka ah agaasime Martin Scorsese; waxaan helnaa mid ka mid ah filimadii maafiyada ee ugu dambeeyay ee la sii daayay 2006. Riwaayadda shakiga leh ee bilayska, waxaan ka helnaa Leonardo Di Caprio iyo Matt Damon oo ah jilayaasha. The Departed ayaa ku guuleystay Oscar sawirka ugu fiican sanadkaas!
Qorshuhu wuxuu xuddun u yahay nolosha laba qof oo soo dhex gala dhinacyada iska soo horjeeda: nin booliis ah ayaa dhex galay mafia iyo mooryaan soo galay booliska. Isku -darka qarxa oo ay ka buuxaan riwaayad, shaki iyo mu’aamaraad! Jilaaga caanka ah ee Jack Nicholson wuxuu bixiyaa muuqaalo aad u tiro badan oo ku kicin doona shucuurtaada waxqabad gaar ah marka uu ciyaarayo Frank Costello. Waa mooryaan dhiigyacab ah oo leh cadow badan oo xiriir aad u dhow la leh mid ka mid ah labada hal -door, kaas oo ka jaajuusaya Waaxda Booliska Boston.
Waxaa jira saddex xagalka jacaylka oo uu madax u yahay cilmi -nafsi yaqaan ka tirsan waaxda bilayska.
Waxaan ka helnaa qalloocyo lama filaan ah sheekada iyo ficil badan, taas oo ah sababta loogu tixgeliyo mid ka mid ah filimada ugu wanaagsan nooca. Ma aha in la xuso, Scorsese had iyo jeer waa dammaanad filim leh dil kali ah!
Lama -taabtaanka ah ee Eliot Ness
Waxaa la sii daayay 1987, filimkan maafiyada ku xiran wuxuu sheegayaa sheekada ka soo horjeedda: taasi waa nooca bilayska ee waxa dhaca la dagaalanka dambiyada abaabulan. Waxaa jilay Kevin Costner waxaana jilaaga ugu weyn ka mid ah Robert de Niro, iyo sidoo kale Sean Connery.
Shirqoolka sWaxay ka dhacdaa Chicago xilligii ugu sarreeyay ee mooryaan Mareykan ah. Jilaaga jilaagu waa a boolis oo shaqadoodu tahay fulinta Mamnuucidda, sidaa darteed wuxuu ku weeraraa baar ku yaal Al Capone laga baqo. Meeshaas wuxuu ka helaa cillad la yaab leh oo ka dhigaysa inuu u maleeyo in booliiska magaalada ay laaluush siinayaan dadka wax tahriibiya; sidaas dGo'aanso inaad ururiso koox kaa caawisa duminta derbiga musuqmaasuqa.
Qiyaaso badan oo shineemooyinkii XNUMX -naadkii ee caadiga ahaa oo leh ficil badan ayaa ku sugaya!
Waxaa jilaya Denzel Washington, filimkan taariikhiga ah wuxuu ku jiraa liiska filimada maafiyada ugu fiican maxaa yeelay wuxuu ku salaysan yahay dhacdooyin run ah waxaanan aragnaa labada dhinac ee guusha iyagoo ku nool sharci ka baxsan.
The Sheekada Frank Lucas, mid ka mid ah dabadhilifyada caan ka ganacsada daroogada oo u dhinta sababo dabiici ah. Lucas wuxuu ahaa mid dhagar badan oo caqli badan, sidaa darteed wuxuu bartay sida loo maareeyo meheradda iyo Wuxuu bilaabay inuu sameeyo shirkad isaga u gaar ah oo uu ku daray qoyskiisa oo dhan inuu asalkoodu hooseeyo. Lucas wuxuu la kulmayaa Eva, oo ah haweeney qurux badan oo uu go'aansado inuu guursado oo uu qoys yeesho.
Wax yar kadib Waxay bilaabaan inay ku noolaadaan qaab aan caadi ahayn oo soo jiita dareenka baaraha aan baabba'ayn Richie Roberts, waxaa ciyaaray Russel Crowe. Isla markiiba baaruhu wuxuu bilaabayaa baaritaan dhammaystiran oo ujeedadiisu tahay inuu daaha ka rogo ninka cusub ee weyn ee maafiyada ah si uu ugu kaxeeyo baararka.
Horumarinta filimka waxaan ka heli karnaa muuqaalada rabshadaha iyo falalka waaweyn ee musuqmaasuqa ee maafiyada u adeegsato sii wadida hawlgalada.
Waxaan ku arki karnaa dhinaca bani'aadamnimada ee qaloocanyaasha filimkan, haddana dhibaatooyinku weligood ma joojiyaan hagardaamooyinkooda. Gangster -ka Mareykanka wuxuu udub dhexaad u noqday kuwa jecel filimada mootada ee Holywood!
Filimo Mafia kale oo lagu taliyay
Marka laga reebo magacyada aan kor ku soo sheegnay, waxaan helnaa kuwo kale oo aad u khuseeya oo hoos ku xusan:
Mar uun Ameerika
Burcadda New York
Dhimashada ubaxyada dhexdooda
Tilmaan jacayl madhan
Ciyaar wasakh ah
Qabsashada: Doofaarka iyo Dheemanka
Liisku ma dhammaado! Waxaa jira magacyo aan la tirin karin oo loogu talagalay noocyadan kuwaas oo inta badan na siiya muuqaalo waaweyn oo ficil, shaki, raaxo iyo rabshad. Xeerka ugu weyni waa in la dilo si loo badbaado!
Wadada buuxda ee maqaalka: I sii wakhti firaaqo » General » Filimada maafiyada ugu fiican